ယင်းအချိန်ရထားအချိန်ဇယားအပြည့်အဝ 57 နာရီတီဟီရန်မှတူရကီ reboots လုပ်သွား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီယင်းအချိန်ရထားအချိန်ဇယားတူရကီတီဟီရန်ပြန်လည်စတင်မှုများအပြည့်အဝ 57 နာရီ
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 98 အီရန်, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
TCDD ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အီရန်ဖြတ်ကျော်အာရှမီးရထား Express ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်တခုတခုအပေါ်မှာသဘောတူညီမှုရရှိ
Turhan Barkan သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ, "တူရကီနှင့်အီရန်အကြားလေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုစတင်တဖန်ရှည်ချိုးပြီးနောက်အီရန်နှင့်တူရကီ Trans-အာရှ Express ကိုအကြားခရီးသည်တင်ပို့ဆောင်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအလှူငွေဖြစ်၏။ " သူကဆိုသည်။
အီရန်အကြားရထားလမ်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲအားဖြင့်ဝန်ကြီး Turhan, တူရကီ Trans-Asian ရထားလမ်း၏သြဂုတ်လ 14 ထံမှတူရကီနှင့်အီရန်အကြားသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်အပြန်အလှန် re-က start အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Turhan တစ်ဦးရှည်လျားသောချိုးနောက်တဖန်တူရကီနှင့်အီရန်အကြားလေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့အာရှရထားပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံအကြားခရီးသည်တင်ပို့ဆောင်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအလွန်လှူဒါန်းခဲ့ရသောအီရန်, Trans နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ရထားလမ်းဧရိယာအတွက်ဆက်လက်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သည်ဖော်ရွေများနှင့်ညီအစ်ကိုချင်းနိုင်ငံတွေကပြောသည်ဟုသူကဆိုသည်။
အဆိုပါ Tabriz-ဗန်အပေါ်ရှာရန်ခရီးသည်တင်ရထား၏အချိန် xnumx't, Turhan ပြောနေကြပါတယ် 2015 ဝန်ကြီးဇွန်လထဲမှာတစ်ပါတ်အပါအဝင်ပြန်လည်စတင်သူကလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မြင့်သောဝယ်လိုအားတီဟီရန်မှတိုးချဲ့သူကပြောပါတယ်။
8 တီဟီရန်တွင်ကျင်းပ။ မေလအတွက်တီဟီရန်နှင့်တူရကီအတွက် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအတူပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေးအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူအီရန်ရထားလမ်းအာဏာပိုင်များအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး Turhan လွှဲပြောင်းကျင်းပသူယာယီဖြတ်ကျော်အာရှရထားအချိန်စတင်တခုတခုအပေါ်မှာသဘောတူညီမှုကြားဖြတ်ကပြောသည်။
"တူရကီနှင့်အီရန်အကြားခရီးသွားအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 57 နာရီဖြစ်လိမ့်မည်"
Kayseri မနေ့က Turhan ရထား7သြဂုတ်လကနေလည်း, နံနက်ယံ၌တူရကီရောက်ရှိကြောင်း 22.05 ခရီးသည်ဖော်ပြထားပြီးနောက်မီးရထား, ခရီးသည်ဗန်, Mus, Elazığ, Malatya, Sivas 65 မှ xnumx't နှင့်အတူရွေ့လျားတီဟီရန်သြဂုတ်ညဦးယံအချိန်နာရီကနေ 188 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တူရကီနှင့်အီရန်အကြားတပတ်သူဟာတစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပြုပါလိမ့်မယ်လို့။
ရထား, အီရန်အတွက် Raja ကုမ္ပဏီ၏6အတွက်တီဟီရန်-ဗန်၏, ထို Turhan အကြား Tatvan-တူရကီ5quadruple kuşetl၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် "ဗန်-Tatvan သည်လှည်းကနေဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်ရေကန်ဗန်အပေါ် operated ကူးတို့ပေးစေမည်အကြောင်း, ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်သွားရောက်ကာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ , တူရကီနှင့်အီရန်အကြားအချိန်ခရီးသွားလာ 57 နာရီအကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ်။ "ဟုပြောသည်။
Turhan, နှစ်နိုင်ငံအကြားပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ယခုနှစ်ကာလတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အီရန်နှင့်အတူစတင်7ရထား applications များ, လည်း 40 တထောင်တန်ချိန်ထက်ပိုသောကုန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ, အီရန်, သင့်လျော်သောအခွန် Turhan ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အလားတူကာလပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိုင်ငံအထဲမှသည်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရထား application ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ကြောင်းဇန်နဝါရီ-ဇူလိုင်လကာလယခုနှစ်မှတ်ချက်ချသူ 40 တထောင်တန်ချိန်ထက်ပိုသောကုန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကဆိုသည်။
Turhan, နှစ်စဉ် 90 ၏ဟုပြောသည်ငွေပမာဏ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရောက်ရှိဖို့တထောင်တန်ချိန်နေဆဲနောက်ထပ်သူတို့ 500 တထောင်တန်ချိန်ပတ်လည်ရှိတူရကီ-အီရန်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏တစ်နှစ်အတွင်း 1 တန်ချိန်သန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုဖော်ပြထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူတို့အလွန်အမင်းကျေနပ်ဖြစ်ကြောင်း, အီရန်နှင့်တူရကီ Turhan အကြားတိုးပွားလာကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင်းအလေးပေးကနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသစ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရေးကြီးသောကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အီရန်ရဲ့ "ဥရောပဖို့တံခါးပေါက်" ဝန်ကြီး Turhan, တူရကီ, ကအောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များအသုံးပြုခဲ့သည်ထွက်ညွှန်ပြ:
"အာရှအလယ်ပိုင်းအထူးသဖြင့်တူရကီအတွက်အီရန်, အာရှတစ်တံခါးပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အာရှနှင့်ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအကြားအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားလမ်းစင်္ကြံဖြစ်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ Marmaray, ဥရောပရထားလမ်း, အဇာဘိုင်ဂျန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, ဥဇဘက်, ကာဇက်စတန်နိုင်ငံအတော်များများနှင့်အတူအရှိဆုံးအကျိုးရှိရထားလမ်းစင်္ကြံအတွက်အထူးသဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံနှင့်အတူဘာကူ-Tbilisi-Kars ဂျော်ဂျီယာ, အီရန်နှင့်အတူရထားလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လင့်များခိုင်ခံ့စေလျက်ရှိသည်။ ကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်ယာဉ်အသွားအလာအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီးဤနေရာတွင်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ငါတို့သည်အောင်မြင်ရန်။ "
တဖန် Start မှတူရကီ-တီဟီရန်ရထားတောင်တက် 30 / 04 / 2019 အီရန်နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်အစ္စလာမ့် 8 အပေါ်အရာရှိတဦးကဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန်အီရန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်တီဟီရန်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေးပါဝင်ခဲ့။ အစည်းအဝေးမှာတီဟီရန်-တူရကီနှင့် "တီဟီရန်-Tabriz-ဗန်ပြန်လည်စတင်ဖို့ရထားများအတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ အီရန်မီးရထားခြောက်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်ရထားများ၏လှုပ်ရှားမှုမှတူရကီ၏နယ်နိမိတ်နှင့်စပ်လျဉ်းကာဇက်စတန်နှင့်တူရကီမီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး, CIS (လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများ၏ဓနသဟာယ) တို့အကြားအီရန်, တာ့ခ်မင်နစ္စတန်, ဥဇဘက်, Tajikistan, ကိုလည်းမူကြမ်း Turhan ၏အပြီးသတ်အဘို့အ2လအတွင်း၌စည်းဝေးကြသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာဘက် အဆိုပါတီဟီရန်-တူရကီအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ပြီးစီး၏ဆက်စပ်အတွက် Tatvan-တူရကီရထားလမ်းနှင့် ...
တူရကီ Express ကိုရထားဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအတောင်တက်တဖန်စတင် 28 / 06 / 2019 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan: "အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူများ, အနုပညာရှင်နှင့်ရထားလမ်းနိူးဒဏ္ဍာရီ Express ကိုရထားတူရကီသည်တူရကီမှHalkalıဇူလိုင်လ5"သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan ကနေနောက်တဖန်စတင်, အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူများ, အနုပညာရှင်များနှင့်ရထားများနှင့်ရထားလမ်းဒဏ္ဍာရီ Express, တူရကီနှင့်တူရကီ၏ချစ်သူများအကြားအချိန် -AnkaraHalkalı-Ankara အကြား5ဇူလိုင်လထံမှလေ့လာရေးခရီးစတင်နိုင်ရန်သတငျးကောငျးကိုပေး၏။ ဝန်ကြီး Turhan, အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူများ, အနုပညာရှင်နှင့်ရထားလမ်းသတ်မှတ်ခြင်းကိုထပ်ဒဏ္ဍာရီ Express, တူရကီ, အတူရကီ၏နောက်တစ်ကြိမ်ချစ်သူများလေ့ကျင့်ပေးဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်Halkalı5 ရထားအကြားအချိန် -Ankara အစေခံပါလိမ့်မယ်ဇူလိုင်လကနေစတင်လိမ့်မယ်။ Pullman စမီးရထား 4,41 ညစာအိပ်ရာဟု ...
Nakhchivan-Tabriz-တီဟီရန်-Mashhad မီးရထားအချိန်ဇယားစတင် 03 / 01 / 2017 Nakhchivan-Tabriz-တီဟီရန်-Mashhad မီးရထားအချိန်ဇယားကို Start: Nakhichevan-အီရန်စီးပွားရေးဖိုရမ်အသစ်တစ်ခုမီးရထားလမ်း၏ပစ်လွှတ်ကဆိုသည်။ အဆိုပါ Nakhchivan ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသမ္မတနိုင်ငံမီးရထားအကောင်အထည်ဖော်၏အဖွင့်အကြားသဘောတူညီချက်မူဘောင်အတွင်းအီရန်နှင့်အတူ Nakhchivan, ထိုအဓိပတိညီလာခံ Vasif Talibov, အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမာမွတ် Vaezi တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Nakhchivan, Tabriz, တီဟီရန်နှင့်Meşedအချိန်ပါလီမန်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား Vasif Talibov မှာမိန့်ခွန်းပြောကြား: "Nakhichevan နှင့် Julfa ဘူတာခရီးသည်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ဗီဇာနှင့်အခြားအရောင်းအဖွင့်ဖို့အားလုံးအသေးစိတ်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုင်တွယ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူတာရုံခေတ်မီထားပါတယ်ထင်နှင့် site ပေါ်တွင်နယ်စပ်ကူးသည့်စာရွက်စာတမ်းများ ...
ကျန်း-Kayaşဆင်ခြေဖုံးလေ့လာရေးခရီးသွားဇူလိုင်လ 29 အပေါ်ကိုထပ်စတင်သည် | တူရကီ 17 / 07 / 2013 နောက်တဖန် 29 ဇူလိုင်လစတင်ကျန်း-Kayaşခရီးသွားလက်မှတ်ပျံသန်းမှု: နယူး Ranch Boulevard ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် 1 သြဂုတ်လ 2011 ကျန်း-Kayaşခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းရေကြောင်းခရီးရှည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမိုင်းအတွက်ကြားဖြတ်BAŞKENTRAYစီမံကိန်းကိုအလုပ်, 29 ဇူလိုင်လ xnumx't ကနေပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ မြို့တော်ကသူတို့မြို့ဆင်ခြေဖုံးပြန်ပြီးနောက် 2013 နှစ်ပေါင်း။ ဒါဟာကျန်း-Kayaşလိုင်းခရီးသွားလက်မှတ်အတွက်အရေးပါသောနေရာအရပ်ဇူလိုင်လအတွင်းပြန်သံလမ်းကိုဆင်းလာမယ့်တူရကီ,2အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လေ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကျန်း-Kayaşခရီးသွားလက်မှတ်လိုင်းရေကြောင်းခရီးရှည်များအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက် 29 သြဂုတ်လ 1 နေ့စွဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ, နယူးလယ်ယာ Boulevard ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်BAŞKENTRAY Project မှလေ့လာမှုတွေကနေသတင်းအချက်အလက်အရအဆိုပါ AA ကိုသတင်းထောက်, 2011 ဇူလိုင်လ xnumx't ကနေပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ တိုင်း ...
re-မီးရထားဝန်ဆောင်မှု Thessaloniki ကနေပေါ်ထွက်လာဖို့စတင် 29 / 04 / 2014 ဒါဟာဘော်လကန်ထဲမှာ Salonika ကနေရထားက Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်: အဆိုပါဂရိအစိုးရ Thessaloniki ထံမှဆိုဖီယာဖို့အချိန်ရထားကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မေလ 10 ဆိုဖီယာ-Thessaloniki ထံမှနေ့စဉ်ပြုနိုင် Thessaloniki-ဆိုဖီယာပျံသန်းမှု။ အဆိုပါလေယာဉ်အေသင်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကဖမ်းဆီးနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့်ခဲ့ကြသည်။ ဂရိနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ '' Transos တစ်ဦးက 'ဆိုဖီယာ, Skopje နှင့်ဘဲဂရိတ်ထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ပျံသန်းမှုများပြန်လည်စတင်အဖြစ်မြို့ကြီးများသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ရထား၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်ဘတ်စ်ကားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ဤဘတ်စ်ကား၏လမ်းကြောင်းများအတွက်လက်မှတ်များလည်းတစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကြောင့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ မေလ 10 မှစ. Thessaloniki ရဲ့ရထားလမ်း xnumx't နံနက်နာရီကနေ, ဆိုဖီယာကနေ Thessaloniki မှ 06.55 ထရန်မျှော်လင့်နေသည်နေစဉ်။ 15.20 ၏ one-way လက်မှတ်စျေးနှုန်းကို ...
အက်စ်တိုးနီးယားရုရှားရထားက Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် 07 / 07 / 2015 အက်စ်တိုးနီးယားရုရှားရထားရုရှားဖက်ဒရယ်ခရီးသည်တင်မီးရထားကုမ္ပဏီက Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်, ဇူလိုင်လ3မော်စကို-St အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ စိန့်ပီတာစဘတ်-တဲလင်းမြို့အကြားလေကြောင်းပျံသန်းမှုများပြုလုပ်ဇူလိုင်လ 10 ရက်ပေါင်းစတင်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ ရုရှားမီးရထားလမ်းကြောင်းရုရှားနှင့်အက်စ်တိုးနီးယားကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးသည်များ၏ဤအချိန်များအတွက်အထူးသဖြင့်ပြုမိခဲ့သည်ကဆိုသည်။ တဲလင်းမြို့က -St ။ ပီတာစဘတ်-မော်စကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းခရီးရှည်အတွက် Estonian အဘိဓါန်ကုမ္ပဏီ Go ကိုရထားသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မေလတွင်ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ရုရှားနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့အကြားစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပြောဆိုလျှင်။ ရထား 21, 20 ဖို့လမ်း: စိန့်အတွက် 05 သစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူမော်စကိုကနေ 16 13 တဲလင်းမြို့ကရောက်ရှိပါလိမ့်မည်: ပီတာစဘတ် '' t ကို 38 ဖြစ်နဲ့သွား။ တဲလင်းမြို့အားဖြင့် 11 ခုနှစ်တွင် ...
re-မီးရထားဝန်ဆောင်မှုအားစတင်မှအစ္စတန်ဘူလ်-Kapukul 25 / 07 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်-Kapukul ရထားယနေ့ကနေနောက်တဖန်စတင်ပျံသန်းမှုအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ် Kapukul အကြား-ရထားပြန်လည်စတင်နေကြသည်။ မီးရထားဝန်ဆောင်မှုပြန်လည်စတင်ကြောင့် Çerkezköy အဆိုပါ 09.30 နာရီမှာတော့အခမ်းအနားအဆိုပါမီးရထားဘူတာမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ပြည်နယ်မီးရထားကျင်းပမည့်အခမ်းအနားအတွက်ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölg "လမ်းမကြီးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ကနေကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်နှင့်ရထားအသွားအလာနှင့်အတူထုတ်လုပ်သော, Kapıkule-ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိရရှိနိုင်ဖြစ်လာHalkalı ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်စည်ပင်ကနှင့်လည်းKapıkule-ဝယ်လိုအားအပေါ်လိုင်း segments များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန် Halkalı နှစ်ဦးအားရထားလိုင်းပေါ်တွင်တင်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ဇူလိုင်လ 25 2016 အပါအဝင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့စတင်ပါလိမ့်မယ်။ "ဟုအဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်။ MOTION နာရီဖျတ်လတ်သွက်လက်စေရထား 07.10 နာရီ, Kızılpınar 09.49, ထိုခဏခြင်းတွင်နာရီကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်အချို့သောဖွစျသညျ ...
ရထားအချိန်ဇယားအကြား Tabriz-ဗန်တဖန်စတင် 17 / 05 / 2018 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က မေလ 14 15-2018 အစည်းအဝေးအတွင်းညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအကြားပြန်လည်တီဟီရန်-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုရဲ့ start များအတွက် Tabriz-ဗန်တို့အကြားအီရန်မီးရထား၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ (RAI) နဲ့အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာကျင်းပခဲ့သည်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် Erol Arikan, ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှနှင့်အခြားအရာရှိများ Yusuf Jagatai ဒုသမ္မတ, ခရီးသည်ဆက်ဆံရေး၏ RAI ဒုတိယသမ္မတဟာဆန်မူဆာဗီကဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားပူးပေါင်းနေစဉ်။ ရထားလမ်း၏ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Erol Arikan အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဇန်နဝါရီလ 01 2017 TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအပေါ်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည် သူနှင့် ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ ဒီနှစ်ရောက်ရှိနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရ ...
TCDD: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT မိနစ်အကြားမဟုတ်412 နာရီ, 3,5 နာရီ 27 / 05 / 2014 TCDD: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT မိနစ်အကြားမဟုတ်412 နာရီ, မီးရထား၏ 3,5 saat.devlet အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာ "4 12 မိနစ်မဟုတ်ပါ, နာရီ, 3,5 နာရီ ... " ဟု၎င်းကပြောသည်။ ပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခရီးသွားလာ "4 12 မိနစ်မဟုတ်ဘဲနာရီ, 3,5 နာရီ ... " ဟု၎င်းကပြောသည်။ မကြာသေးမီရက်အတွင်းမီဒီယာအစီရင်ခံစာများ,4မိနစ်ရှိပါလိမ့်မယ်သောတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နာရီ 12 မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအချက်အလက်များ၏ခရီးသွားလာအချိန်ကဆိုပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူမှားကပြောပါတယ်, "သို့သျောလညျးတူညီသတင်းမှာ" မြန်နှုန်းမြင့်ရထား "နှငျ့" အရှိန်ရထား "ဘယ်မှာ TCDD, ဖြင့်ကြေညာချက်ထဲမှာ ဘေးထွက်နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများကသတင်းအချက်အလက်အခြမ်းအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုများအများကြီးသုံးပြီး၏အယူအဆ ...
ဇန်နဝါရီလ 31 Tuzla တောင်တက်စတင်များကဲ့သို့ပင်ရပ်တန့်ခံရဖို့ရထားများအတွက် Derbent 2012 27 / 01 / 2012 ဇန်နဝါရီလ 31 မြို့တော်အပေါ်အဆုံးသတ်မည်သည့်ရထားရှေ့တော်၌ထိုအချိန်, Derbent Tuzla အကြားအမြန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ဖြစ်ပါတယ်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အချိန်ကိုတင်ထားတော်မူမည်သောဘတ်စ်ကားအဖြစ်ရပ်တန့်ခံရဖို့ရထားများအတွက် Tuzla အကြား Derbent ၏ဇန်နဝါရီလ 31 2012 သမိုင်း။ တစ်ချိန်ကသားကောင်ဖြစ်ကျင်းပထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နိုင်ငံသားတွေ 200 အရေအတွက်ကိုအမှုကိုပြုခံရဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ရပ်တန့်ထားရန်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားသည့်ရထား၏ (YHT) Project မှ။ 8000 ခရီးသည်အကြားနေ့စဉ်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူခရီးစဉ် Derbent Tuzla ထံမှခံရစေရန်ရပ်နားမှုများရထားဘူတာ Parallel ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ရထားဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားအချိန်ဇယားထက်ဇန်နဝါရီ 31 နေ့စွဲများတွင်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လတံ့သော 2012 ...
Trans-အာရှ Express ကို
တဖန် Start မှတူရကီ-တီဟီရန်ရထားတောင်တက်
တူရကီ Express ကိုရထားဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအတောင်တက်တဖန်စတင်
ကျန်း-Kayaşဆင်ခြေဖုံးလေ့လာရေးခရီးသွားဇူလိုင်လ 29 အပေါ်ကိုထပ်စတင်သည် | တူရကီ
re-မီးရထားဝန်ဆောင်မှု Thessaloniki ကနေပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်
အက်စ်တိုးနီးယားရုရှားရထားက Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်
TCDD: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT မိနစ်အကြားမဟုတ်412 နာရီ, 3,5 နာရီ
ဇန်နဝါရီလ 31 Tuzla တောင်တက်စတင်များကဲ့သို့ပင်ရပ်တန့်ခံရဖို့ရထားများအတွက် Derbent 2012